Ma doonaysaa in aad "gaabin" wakhtiga manjyada? Ma doonaysaa in aad wax ku ool u noqoto beerta oo aad leedahay wax soo saarka dhamaadka tayada sare leh? Haddii aad tahay beeraley guri oo leh hal geed oo keliya oo ku jira armaajooyinkaaga ama beero acre badan leh oo leh daraasiin noocyo ah, talooyinkan iyo tabahan ayaa ku anfici doona. ...
Ka fogaanshaha heerkulka sare waa caqabad ay la kulmaan qaar badan oo ka mid ah beeralayda gudaha, inkasta oo dhibaatada siyaabo kala duwan wax looga qaban karo. Waa kuwan qaar ka mid ah siyaabaha ugu waxtarka badan ee aad ku ilaalin karto heerkulka saxda ah ee teendhadaada koraya si ay u koraan dhirta ugu fiican. Kaarboon-dioxide sida...
Waa kuwan nalalka aad u baahan tahay si aad u hesho dhir tayo leh wakhtiga ugu yar ee suurtogalka ah: Laydhka koritaanka rasaasta Aad bay u fududahay in la rakibo kuwa yaryarna waa fur oo ciyaaraan. Ka dib markaad ku dhejisid derbiga, waxaad ku dhejin kartaa dusha sare ee dhirta. Haddii aad rabto habayn fudud si aad u kordhiso wax-soosaarka dhirta, waxaad...